रन्जुको टक्कर लिने युवती छैनन ? « Sansar News
रन्जुको टक्कर लिने युवती छैनन ?
१५ असार २०७४, बिहीबार ०५:३७
पहिलो चरणको निर्वाचन भएको डेढ महिनापछि आज तिनवटा प्रदेशमा दोश्रो चरणको निर्वाचन भइरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा काठमाण्डौ महानगरको मेयरको प्रत्यासी बनेकी २१ वर्षिया युवती रन्जु दर्शनाले सबैको ध्यान खिचेकी थिइन । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा अन्य रन्जुहरु नजन्मिएका हुन वा चर्चा र चाँसो नभएको हो ? खासै भेऊ पाउन सकिएको छैन । काठमाण्डौको मेयरमा काग्रेस पराजित भएपछि रन्जु दर्शनाले नै काग्रेसको भोट काटेकोले कागे्रस पराजित हुन पुगेको हो भन्ने सम्मका अड्कलबाजीहरु सुनिए । आज हुँदै गरेको निर्वाचनमा रन्जुको जतिको चर्चा भएका अन्य दर्शनाहरुको खासै नाम देखिएन । महानगरकी पात्र भएर मात्रै रन्जुको धेरै चर्चा भएको हो वा उपत्यका बाहिर यस्ता पात्र नदेखिएकै कारण चर्चा नभएको होला ? रन्जुकै उमेरका नभएपनि युवा पुस्ताले पक्कैपनि बलियो उपस्थिती देखाएका होलान तैपनि रन्जुको जतिको चर्चा भएको, गरेको देखिएन ।
‘रन्जु दर्शना मेयरमा नउठेको भए काग्रेसले जित्ने रहेछ, सबै काग्रेसका भोट जति रन्जुले काटेपछि एमालेले जित्ने भइहाल्यो नि । लगभग बिस हजारको अन्तरमा एमालेले जितेको छ, रन्जुले २३ हजार मत कटाएकी छन अझ साझा पार्टीको मत अठार हजार बढी छ, यो सबै मत काग्रेसकै कोटाको काटिएको हुनुपर्छ’ काग्रेस समर्थकहरुले मेयरमा हारेपछि यस्ता धेरै गुनासाहरु सुनिए । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा रन्जुकै उमेरका वा युवा पुस्ताका युवतीले टक्कर दिएको सुन्न पाइएला कि नपाइएला ? मतपरिणाममा तेश्रो भएपनि रन्जुले देश विदेशमा नाम कमाउन चाँही सुफल भइन । युवा पुस्तालाइ राजनीतिप्रति आर्कषित गर्न सफल भइन । आफुले मतपरिणाम कम ल्याएपनि मनचाँँही मज्जाले जितेको रन्जुको दावी छ । काठमाण्डौँ महानगरको मेयरमा बिजयी एमालेका विद्या सुन्दर शाक्यले ६४ हजार ९१३ मत पाए, उनका निकटमत प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका राजुराजले ४५ हजार २६९ मत प्राप्त गरे । विवेकशील नेपाली दलकी रञ्जु दर्शना २३ हजार ४३९ मतका साथ तेस्रो भइन्, साझा पार्टीका किशोर थापा १८ हजार ४९६ मतसहित चौथो भए । पुराना खारिएका दलसँग नातिनी सरहकी उम्मेदवारले टक्कर दिएपछि सबत्र चाँसो काठमाण्डौँ महानगरमै केन्द्रित थियो , अन्तत परिणाम पनि त्यस्तै आइदियो । माओवादी केन्द्र र संघिय समाजवादी फोरम सहित अन्य स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरु छायाँमा परे ।
रन्जु दर्शनाले यति धेरै भोट कसरी ल्याइन त ? न त सबै मतदाताले रन्जुलाइ चिनेका थिए न रन्जुले नै सबै मतदाताको घरदैलोमा पुगेर आफुलाइ चिनाउन पाएकी थिइन, नामै सुनेको भरमा, टेलिभिजनमा अनुहार देखेकै भरमा यत्रो मत दिए त काठमाण्डौबासीले ? अहिले पनि टोलटोलमा यस्तै कुराकानी सुनिन्छन । रन्जुको जस्ता आँटिला युवतीहरु छैनन कि क्याहो ? कही चर्चा छैन त ? टोलटोलमा गफ सुनिन्छन । चुनाव हुनुभन्दा करिब २५ दिन अघि विवेकशिल दलले रन्जुलाइ मेयरको उम्मेदवार उठाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । ठुला राजनीतिक दलहरुले आफ्ना उम्मेदवार छान्न नसकिरहेको अवस्थामा २१ बर्षिया युवती मेयरको प्रत्यासी बनेको खबरले सबैको ध्यान आकर्षण गरेको थियो । रन्जुको नाम छनौट भएसँगै सबैजसो दैनिक अखबारहरु रन्जुमय बने, अनलाइन पोर्टलहरु , टेलिभिजन तथा सामाजिक संजालमा रन्जु दर्शनाको बारेमा मात्रै समाचार देखिन थाले, उनकै अन्र्तवार्ता प्रस्तुत हुन थाले । छोटो समयमा सबैभन्दा धेरैपटक खोजी भएको नाम सायद रन्जुकै थियो होला । देशभित्रबाट मात्रै होइन विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत रन्जुको उम्मेदवारीलाइ निकै समर्थन गरे । हुन त रन्जुकै उमेरभन्दा एक दुइवर्ष परिपक्क युवतीहरुले चुनावै जितेर देखाए तैपनि रन्जुको जति चर्चा उनिहरुको हुन सकेन । कारण बुझिनसक्नु छ ।
छोटो समयको अवधिमा काठमाण्डौका मतदाताले रन्जु र उनको दललाइ चिने साच्चिकै न्याय गरे त्यो भने अभुतपुर्व नै छ । चुनाव हुनुभन्दा एकसाता अघि पाएको इस्टकोट चुनाव चिन्हले नसोचेको मत पाएको देखेर ठुला राजनीतिक दलका हस्तीहरु नै छक परेका छन । टोलटोलका चिया गफहरुमा समेत रन्जु के कारणले यत्रो चर्चामा आएकी हुन त भन्ने खालका चर्चा बढी हुने गरेको देखिन्छ । रन्जुले बढी मत पाएको खण्डमा त्यही हजार पन्ध्रसयको हाराहारीमा हो, सबै ठुला दलका कार्यकर्ता छन, कार्यकर्ता नभएपनि तिनै ठुला दलसँग आस्था राख्नेहरु बढी छन, नयाँ दलसँग आश भरोस कसैलाइ छैन , नचिनेको दललाइ कस्ले भोट हाल्छ ? आफ्नै चुनाव चिन्ह समेत नपाएको दल, नामै नसुनेको कलिलो उमेरको उम्मेदवारलाइ कस्ले पत्याउला र ? भन्ने अनुमान थियो मत गन्दै जाँदा सबैका अनुमान फेल खाए । सायद रन्जुले पनि सोचेकी थिइनन होला तेश्रो स्थान कब्जा गर्छु भनेर ।
पुराना राजनीतिक दलबा व्यवहार आजित भएका र नयाँ स्वाद चाहेका हरुले रन्जुलाइ रोजेको स्पष्टै देखिन्छ । यति मात्रै होइन रन्जुको दललाइ भन्दा पनि रन्जुको अनुहार हेरेर धेरै भोट खसेको भन्नेहरु पनि भेटिन्छन जे होस रन्जुले पुराना हस्तिलाइ गतिलो झापड पक्कै दिएकी छन । विवेकशिल दलका सस्थापक सदस्य मिलन पाण्डेको केही दिनअघिको एउटा लेखमा भनेका छन ‘विवेकशील नेपालीको १० हजार मत कट्नै लाग्दा सबैभन्दा विद्यासुन्दर शाक्य राष्ट्रिय सभागृहकै प्राङ्गणमा थिए । रञ्जुलाइ देख्नासाथ उनले भने ‘तपाईंहरुले यति मत ल्याउनुहुन्छ भन्ने त मैले सोचेको थिइनँ, अब परिणामपछि एकचोटि बस्नुपर्छ’ । शाक्य मात्रै होइन धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरु आफुले नसोचेको मत परिणाम रन्जुले ल्याएकोमा अचम्म मानिरहेका छन । रञ्जुको उम्मेदवारीदेखि निर्वाचनसम्मको तिनसाताको समयावधिमा हासिल गरेको सफलताले साच्चिकै फरक स्वादको प्रतिक्षामा मतदाता रहेछन भन्ने आभाष भइरहेको छ ।
आम युवा पुस्ता जो राजनीतिक दलको कृयाकपालबाट आजित भएका छन उनिहरुले पक्कै पनि यो पटकको निर्वाचनमा नयाँ अनुहार रोजेको हुनसक्छ । पुरानो पुस्तालाइ युवा छोराछोरीले परामर्श गरेर एक भोट रन्जुको लागि दिनुपर्छ भनेर सिकाएको हुन सक्छ, बदर मतबाट पनि त्यो छर्लगै हुन्छ । किनकी पुराना पार्टीलाइ एक भोट दिएर त्यही भोट रन्जु र साझा पाटीको चुनाव चिन्हमा पनि आएको थियो । अर्को कुरा पहिलो पटक मतदान गर्ने अवसर पाएका रहेक मतदाताले आफ्नै उमेरको हेरेर पनि रन्जुलाइ नै भोट होलेका हुनसक्छन । त्यसो त चुनावको दिन एक टेलिभिजनसँग कुरा गरेकी ७५ वर्षिया काठमाण्डौकी मतदाताले नामै तोकेर नातिनी जस्तै रन्जुलाइ भोट हालेको बताएकी थिइन । यत्रो वर्ष पुराना नेताले देश खाँदाखाँदा जनतालाइ नागेंझार पारिसके त्यही भएर अहिले नयाँ अनुहारलाइ भोट हालियो । नयाँ पुस्ताले केही गर्छन कि भन्ने आश ति बृद्ध आमालाइ समेत रहेछ । त्यति पाको उमेरकी आमाले त नातिनी सरहकी भनेर एक भोट रन्जुको लागि दिइन भने उनका छोरा छोरी नाति नातिनीले पक्कैपनि रन्जुको लागि मुठी फुकाएर सहयोग गरेका हुन सक्छन । रन्जुले अघि सारेको चुनावी घोषणा पत्र र उनको दलको राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि पनि भावना र आशाको मत बढी पाएको हुन सक्छ ।
युवा पुस्ता रन्जुले जित्नुपर्छ भनेर लागि परेका थिए भने पुराना राजनीतिक दलका हस्तीहरु उनको जमानता समेत जफत हुन्छ भन्दै हासिमजाकको मात्र बनाएका थिए । जमानत त जफत भएन नै रन्जुले अहिलेका मतदाताको नजरमा अमिट छाप छोड्न भने सफल भइन । पुराना राजनीतिक दल, जनताको सामु वर्षौदेखी परिचित अनुहार, मतपत्रको सिरानमा लस्करै राखिएका परिचित चुनाव चिन्ह यस्तो अवस्थामा पनि तिन साताको बिचमा रन्जुले प्राप्त गरेको यो मत सख्यात्मक रुपमा जति भएपनि बिजय हासिल गरेसरहको मम हो । एकसाता अघि पाएको चुनाव चिन्ह, लामो मतपत्रको एक्काइस नम्बरमा राखिएको चुनाव चिन्हमा मतदाताले साच्चिकै विवेक पुराएरै मतदान गरेको अवश्य देखियो ।
नानी मैयाँ दाहाल चुनाव अघिसम्म कसैको नजरमा परिचित नाम थिए, एकाएक काठमाण्डौको मेयरमा पुराना चर्चित हस्तिहरु लडाएर बिजयी भएपछि एकाएक चर्चित बनेकी थिइन । कतिपयले रन्जु दोश्रो नानीमैयाँ बन्न के बेर समेत भनेका थिए । जे होस बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस प्रथम चरणको निर्वाचनले गरायो । चार वर्षअघि दर्ता भएको विवेकशिल र गर्भमै रहेको साझा पाटीका उम्मेदवारले पाएको मत परिणामलाइ कम आक्न सकिदैन । यसको दुरगामी प्रभाव साच्चिकै सुखद होला या नहोला अहिले नै अनुमान लगाउन सकिदैन । प्रायजसो निर्वाचन क्षेत्रमा युवा पुस्ता बढी बिजयी भएका छन, शिक्षित युवा पुस्ताले अबको राजनीति संचालन गर्नुपर्छ र गर्न सक्छन भन्ने पाठ रन्जु दर्शना जस्ता युवा पुस्ताले सिकाएका छन । आफ्नो दरिलो पकड मानिएको क्षेत्रमा चिप्लिएका ठुला दलहरु पनि निकै झस्किएका छन अहिलेको चुनावको परिणामले । रन्जु जस्ता युवा पुस्ताका पात्रको राजनीतिमा उदय मात्र हुनु उपलब्धी होइन स्थापित हुन सक्नु ठुलो कुरा हो । खहरेको भेलजस्तो एकैछिनमा सुक्ने होइन कि युवा पुस्ता भनेको समुद्र जस्तो निरन्तर आफ्नो गतिमा बग्न सक्ने खालको हुनुपर्छ ।